इटहरी ,बिराटनगर, इनरुवा हुदैँ काकडभिट्टा सम्म रेल कुदाउने ओली सरकारको तयारी – Life Nepali
इटहरी ,बिराटनगर, इनरुवा हुदैँ काकडभिट्टा सम्म रेल कुदाउने ओली सरकारको तयारी
प्रदेश १ मा निर्माण हुने विद्युतिय रेलमार्गको बातावरणीय प्रभाव मुल्याकन तयार भएको छ । नेपाल रेल विभागले पूर्व पश्चीम रेलवेज अन्तरगत इनरुवादेखि काकरभिट्टा र विराटनगरदेखि इटहरीसम्मको रेलवेजको बातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन तयार गरेको हो । विराटनगर–इटहरी लिङ रेलवेज २०।१६ किलोमिटर हुनेछ । इनरुवा काकडभिट्टा रेलवेजको लम्बाई भने १०६।५९ किलोमिटर हुनेछ ।
जम्मा १२६। ७५ किलोमिटर रेलवेज निर्माण गर्दा ९० अर्ब दुई करोड, ८२ लाख ८६ हजार लागत अनुमान गरिएको छ । पूर्व पश्चिम रेलवेज निर्माण गर्दा ६ सय ३५। ७७ हेक्टर जग्गा अभिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सो मध्ये ५ सय १२ हेक्टर खेती योग्य जमिन र १९।६० हेक्टर वन क्षेत्र पर्छ । त्यस्तै ३३ हेक्टर घनाबस्ती क्षेत्रमा पर्छ । विराटनगर इटहरी रेलवेज निर्माण गर्दा १९३ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
प्रस्तावित पूर्व पश्चिम रेलवेजको इनरुवा काकरभिट्टा खण्डमा ३५७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । २०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रेलवेज निर्माण गर्दा चारहजार परिवारको ५ सय १२।६९ हेक्टर जमिन अधिग्रहण हुनेछ । विद्युतिय रेलवेजको बातावरणीय प्रभाव मुल्याङक ९इआइए० गरेका विज्ञ रिकेश चित्रकारका अनुसार इनरुवा बजारको जनता चोक नजिकैबाट सुरु हुने रेलवेज पूर्व पश्चिम राजमार्गको करिब २ किलोमिटर दक्षिण हुँदै काकडभिट्टासम्म पुग्नेछ । काकडभिट्टामा मेची नदीबाट २ किलोमिटर भित्र अन्तिम स्टेशन बन्ने उनले बताए ।
प्रस्तावित रेलेवजले तीन जिल्लाका १८ स्थानीय तहलाई छुनेछ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग पश्चिम झापाको तीन वटा, मोरङका नौं वटा र सुनसरीका तीनवटा स्थानीय तहलाई छुनेछ । ती स्थानीय तहमा केही वडालाई रेलवेजले छुनेछ । बातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्दा कम क्षति हुने स्थानमा पर्ने गरी बातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गरिएको चित्रकारले जानकारी दिए । प्रस्तावित रेलवेजमा सुनसरीको भोक्राहा गाउँपालिकाका ५ र ७ नम्बर वडालाई छुनेछ ।
त्यस्तै इनरुवा नगरपालिकाको २,४,५,७ र ९ वडा र इटहरी उपमहानगरपालिकाका ७,१० ११,१२,१४,१५ र १६ वडालाई रेलवेजले छुनेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गले सुन्दरहरैचा, बेलबारी, पथरी शनिश्चरे, उर्लाबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकालाई छुनेछ । त्यस्तै विराटनगर इटहरी लिङ्क रेलवेजले विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका र कटहरी गाउँपालिकाका केही वडालाई छुनेछ । झापाका दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, शिवसताक्षि नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, विर्तामोड नगरपालिका र मेचीनगर नगरपालिकालाई छुनेछ ।
रेल विभागले बातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन तयार भएपछि आइतबार विराटनगरमा सार्बजनिक सुनवाई गरेको थियो । सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै माझीले सरकारले नै विभेद गरी मुआब्जा वितरण गरेको बताए । ८ वर्ष अघि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा अझै नदिएको बताउँदै उनले रेलवेज निर्माण गर्दा जनतालाई भ्रममा नपार्ने आग्रह गरे ।(रासस)
Previous डा. शिबमाया तुम्बाहाङ्फे नै सभामुख
Next मलाई सरुवाको डर छैन ! अब नेतालाई पनि छोडिदैन – एसपी राठौर